युवतीहरुले पहिलो सेक्सको क्रममा ओरल सेक्स रुचाउने तथ्य सार्वजनिक ! यसकारण युवतीहरु ओरल सेक्सको मज्जा लुट्न चाहने रहेछन « Light Nepal
युवतीहरुले पहिलो सेक्सको क्रममा ओरल सेक्स रुचाउने तथ्य सार्वजनिक ! यसकारण युवतीहरु ओरल सेक्सको मज्जा लुट्न चाहने रहेछन
Published On : 12 January, 2018 12:39 am
युवतीहरुले ओरल सेक्सलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । अमेरिकामा केहि समयअघि जारी गरिएको नेशनल हेल्थ रिपोर्ट अनुसार युवतीहरुले पहिलो सेक्सको क्रममा ओरल सेक्स रुचाउने तथ्य सार्वजनिक भएको हो । योनी संभोगवाट एचआइभी एड्स लगायत रोग सर्ने र गर्भ रहन सक्ने संभावना भएकाले युवतीहरु ओरल सेक्सको मज्जा लुट्न चाहने जनाइएको छ ।
१५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका दुइ तिहाइ युवाले ओरल सेक्स गर्ने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । केटीले पहिलो संभोग अघि ओरल सेक्स गरेका पाइन्छ । सर्वेका अनुसार २६ प्रतिशत युवतीले योनी संभोग अघि ओरल सेक्स गरेका छन्, जवकी २७ प्रतिशत युवाले एक वार योनी संभोगपछि ओरल सेक्सका आनन्द उठाएका छन् । ७ दशमलव ४ प्रतिशत युवती यस्ता पनि रहे, जसले योनी संभोग र ओरल सेक्सका मजा एकसाथ लुटे ।
सर्वेमा यस कुराको पनि खुलासा भएको छ कि महिलाको अपेक्षा पुरुष सोशल नेटवर्किङ वेबसाइटमा सेक्सको कुरा ज्यादा गर्न मन पराउछन् । युवाले आफ्नो धेरैजसो समय पोर्न सामग्री खोज्नमा व्यातित गर्छन् ।